Shirar gaar gaar ah oo ka socda Muqdisho iyo Guuxa caawa ka taagan doorashada - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon Shirar gaar gaar ah oo ka socda Muqdisho iyo Guuxa caawa ka...
Shirar gaar gaar ah oo ka socda Muqdisho iyo Guuxa caawa ka taagan doorashada
Waxaa magaalada Muqdisho ka socda shirar gaar gaar ah oo ay leeyihiin musharaxiinta, siyaasiyiinta iyo Xildhibaanada kaa oo looga hadlayo arrimaha doorashada.
Musharaxiinta madaxtinimo ayaa si weyn ugu baraarugay shirka haatan ka socda Muqdisho kadib markey ay soo ifbaxday in madaxda maamul goboleedyada ay doonayaan iney door ku yeeshaan soo xulidda ergooyinka iyagoo markaasi awood u yeelan doono iney soo saartaan shaqsiyaadka ay wataan.
Sidoo kale saameyntii siyaasadeed ee Muqdisho ay ku lahaayeen madaxweynahasha Jubbaland iyo Puntland ayaa hoos u dhacday kadib markii ay meesha ka saareen usoo xulidda aqalka sare rag katirsan xisbiyada mucaaradka.
Waxaa Muqdisho laga dareemayaa hadal heyn balaaran oo ka dhalatay habraaca la doonayo in doorashada Aqalka Sare lagu qabto taa oo lagu kala qeybsanyahay.
Dhanka kale waxaa jira musharaxiin kala goostay iyo kuwa midba ololahiisa uu gooni u tumanayo iyadoo ay muuqato in lakala siibtay markaan maadama dalka uu toos u galay doorashada.
Dhanka kale Villa Soomaaliya ayaa ku dadaaleysa faragelin toos ah oo doorashada Golaha shaacbka iyadoo u soo mareysa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Maxamed Cirro walow la isk khilaaf warqad uu soo saaray isagoo eedeyn dusha kaga tuuray madaxda maamul goboledyada.
Sidoo kale xogo aan helnay ayaa sheegaya in Sheekh Shariif iyo Farmaajo ay isfahmeen islamarkaasna ay xiriir hoose leeyihiin balse shabakadda Allbanaadir Media ayaa idiin soo gudbin doonto xog xasaasi ah oo isbaheysigaas ku saabsan.